ယူရိုပွိုငျပှဲပွီးရငျ ဘယျသူတှေ နားကုနျကွမလဲ? Supercomputer ရဲ့ ခနျြပီယံက ဘယျသူလဲ? – Sports A2Z
၅။ ယူရီ ဇာကော့ဗျ – ရုရှား
အသကျ ၃၇ နှဈအရှယျ ဘယျနောကျခံအစှနျလူဟာ နိုငျငံတကာပွိုငျပှဲကို ၁၆ နှဈတိတိ ကစားလာခဲ့ပွီးနောကျမှာတော့ ကစားသမားဘဝအနိုငျပိုငျးဖို့ အခြိနျရောကျလာခဲ့တာပါ။ ရုရှားဘောလုံးသမိုငျးမှာ အကွညျညိုခံရဆုံးတှထေဲက တဦးဖွဈတဲ့ ဝါရငျ့ကွီး ဇာကော့ဗျအတှကျ ယူရို ၂၀၂၀ ဟာ နောကျဆုံးပွိုငျပှဲဖွဈလာဖို့ ရာခိုငျနှုနျးမြားနတောပါ။
၄။ လူးကပျဈ ဖဘေီယနျစကီး – ပိုလနျ
ပရီးမီးယားလိဂျတခတျေမှာ နာမညျကွီးခဲ့တဲ့ ဖဘေီယနျစကီးက တညျငွိမျတဲ့လကျစှမျးတှကေို ပွသခဲ့ပမေယျ့ ပိုလနျအသငျးမှာတော့ ၅၆ ပှဲသာ ကစားခှငျ့ရထားတာပါ။ အသကျ ၃၆ နှဈသားဟာ ယူရိုပွိုငျပှဲမှာ ရှကျဇနီကို ကြျောဖွတျပွီး နံပါတျ ၁ ဂိုးသမားဖွဈနိုငျမလား မသခြောသေးသလို ဒီပွိုငျပှဲအပွီးမှာတော့ ပိုလနျအသငျးကနေ ပငျစငျယူလိုကျဖို့ ရှိနပေါတယျ။
၃။ ဂြျောဂြို ခေးလီနီ – အီတလီ
အီတလီအသငျးအတှကျ ၁၀၇ ပှဲကစားထားတဲ့ ခေးလီနီက လကျရှိ ယူရိုပွိုငျပှဲဝငျ အဇူရီမှာအတှအေ့ကွုံအပွညျ့ဝဆုံးနဲ့ အသကျအကွီးဆုံး အီတလီကစားသမားတဦးဖွဈသလို အသကျ ၃၆ အရှယျမှာ အီတလီမှာရော တူရငျမှာပါ ပထမဦးစားပေး ကစားသမားဖွဈနဆေဲပါ။ ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာ ဒဏျရာတှကွေုံခဲ့ရတဲ့နောကျတော့ ဒီပွိုငျပှဲဟာ သူ့ရဲ့နိုငျငံတကာအဆငျ့ နောကျဆုံးပွိုငျပှဲကွီးလညျး ဖွဈလာနိုငျတာပါ။
၂။ ပီပီ – ပျေါတူဂီ
အသကျ ၃၈ အရှယျ ပျေါတူဂီခံစဈမှူးကွီး ပီပီကတော့ အသကျအရှယျနဲ့ မလိုကျဖကျအောငျဘဲ ခွစှေမျးတညျငွိမျပွီး ရငျ့ကကျြပါးနပျတဲ့ ကစားနိုငျစှမျးကို ပိုငျဆိုငျထားသလို ၂၀၀၈ ခုနှဈကနေ အခုခြိနျအထိ ပျေါတူဂီအသငျးရဲ့ နံပါတျ ၁ ဦးစားပေးရှေးခယျြမှုအဖွဈ ရပျတညျနဆေဲဖွဈပမေယျ့ ရီးရဲလျကစားသမားဟောငျးဟာ ကွံ့ခိုငျမှုပိုငျးအရတော့ ယူရိုအပွီးမှာ အနားယူရဖှယျ ရှိနပေါပွီ။
၁။ လူကာ မိုဒရဈချြ – ခရိုအေးရှား
ခရိုအေးရှားအသငျးကို ကမ်ဘာ့ဖလားဗိုလျလုပှဲအထိ ပို့ဆောငျပေးထားခဲ့တဲ့ ဝါရငျ့ကှငျးလယျဗိုလျခြုပျကွီးဟာ ယူရို ၂၀၂၀ မှာလညျး အသငျးအတှကျ အခရာအကဆြုံး ကစားသမားဖွဈနသေလို ယူရိုပွိုငျပှဲအပွီး လာမယျ့ စကျတငျဘာမှာ အသကျ ၃၆ နှဈပွညျ့ပွီဖွဈတာကွောငျ့ လကျရှေးစငျကစားသမားဘဝကနေ အနားယူသှားဖှယျ ရှိနသေလို ၂၀၂၂ ကမ်ဘာ့ဖလားကို နောကျဆုံးတကွိမျ ဝငျနှဲဖို့လညျး ဖွဈနိုငျပါသေးတယျ။
ဒါ့အပွငျ အခုယူရိုပွိုငျပှဲမှာတော့ အံ့အားသငျ့စရာတှေ ယူဆောငျလာခဲ့သူက စူပါကှနျပြူတာပါ။ Sports Radar က ပွုလုပျတဲ့ စူပါကှနျပြူတာရဲ့ တှကျခကျြမှုမှာ ယူရိုခနျြပီယံဖွဈမယျ့အသငျးက စပိနျ၊ ဂြာမနီ၊ ပျေါတူဂီတို့ကို ကြျောဖွတျပွီး ယူရိုဗိုလျလုပှဲမှာ ဒိနျးမတျကို သုံးဂိုး-နှဈဂိုးနဲ့ အနိုငျယူဗိုလျစှဲမယျ့ ခကျြလကျရှေးစငျအသငျးဖွဈတယျလို့ သိခဲ့ရတာဟာ လှုပျလှုပျရှားရှားလညျးဖွဈစခေဲ့ပါတယျ။
စူပါကှနျပြူတာနဲ့ နောကျထပျခနျ့မှနျးခကျြမှာတော့ အင်ျဂလနျအသငျးနဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျ အမာခံပရိသတျတှအေတှကျတော့ အသညျးကှဲစရာ သတငျးတပုဒျပါ။ ခနျြပီယံဖွဈမယျလို့ ရပေနျးစားနတေဲ့ အင်ျဂလနျအသငျးဟာ အုပျစုဗိုလျအဖွဈ လှတျလှတျကြှတျကြှတျ ဆီမီးဖိုငျနယျအထိသာ ရောကျလာနိုငျပွီး ဒိနျးမတျအသငျးရဲ့ အလဲထိုးခွငျးကို ခံရမယျလို့ သုံးသပျသှားခဲ့ခွငျးက ဘယျလောကျအထိ မှနျကနျနိုငျမလဲဆိုတာ ရောမမွို့က အီတလီနဲ့ တူရကီရဲ့ ယူရိုအဖှငျ့ပှဲကနေ စတငျရငျခုနျကွညျ့ကွရအောငျပါ။
၅။ ယူရီ ဇာကော့ဗ် – ရုရှား
အသက် ၃၇ နှစ်အရွယ် ဘယ်နောက်ခံအစွန်လူဟာ နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲကို ၁၆ နှစ်တိတိ ကစားလာခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့ ကစားသမားဘဝအနိုင်ပိုင်းဖို့ အချိန်ရောက်လာခဲ့တာပါ။ ရုရှားဘောလုံးသမိုင်းမှာ အကြည်ညိုခံရဆုံးတွေထဲက တဦးဖြစ်တဲ့ ဝါရင့်ကြီး ဇာကော့ဗ်အတွက် ယူရို ၂၀၂၀ ဟာ နောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲဖြစ်လာဖို့ ရာခိုင်နှုန်းများနေတာပါ။
၄။ လူးကပ်စ် ဖေဘီယန်စကီး – ပိုလန်
ပရီးမီးယားလိဂ်တခေတ်မှာ နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ ဖေဘီယန်စကီးက တည်ငြိမ်တဲ့လက်စွမ်းတွေကို ပြသခဲ့ပေမယ့် ပိုလန်အသင်းမှာတော့ ၅၆ ပွဲသာ ကစားခွင့်ရထားတာပါ။ အသက် ၃၆ နှစ်သားဟာ ယူရိုပြိုင်ပွဲမှာ ရှက်ဇနီကို ကျော်ဖြတ်ပြီး နံပါတ် ၁ ဂိုးသမားဖြစ်နိုင်မလား မသေချာသေးသလို ဒီပြိုင်ပွဲအပြီးမှာတော့ ပိုလန်အသင်းကနေ ပင်စင်ယူလိုက်ဖို့ ရှိနေပါတယ်။
၃။ ဂျော်ဂျို ခေးလီနီ – အီတလီ
အီတလီအသင်းအတွက် ၁၀၇ ပွဲကစားထားတဲ့ ခေးလီနီက လက်ရှိ ယူရိုပြိုင်ပွဲဝင် အဇူရီမှာအတွေ့အကြုံအပြည့်ဝဆုံးနဲ့ အသက်အကြီးဆုံး အီတလီကစားသမားတဦးဖြစ်သလို အသက် ၃၆ အရွယ်မှာ အီတလီမှာရော တူရင်မှာပါ ပထမဦးစားပေး ကစားသမားဖြစ်နေဆဲပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာ ဒဏ်ရာတွေကြုံခဲ့ရတဲ့နောက်တော့ ဒီပြိုင်ပွဲဟာ သူ့ရဲ့နိုင်ငံတကာအဆင့် နောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲကြီးလည်း ဖြစ်လာနိုင်တာပါ။
၂။ ပီပီ – ပေါ်တူဂီ
အသက် ၃၈ အရွယ် ပေါ်တူဂီခံစစ်မှူးကြီး ပီပီကတော့ အသက်အရွယ်နဲ့ မလိုက်ဖက်အောင်ဘဲ ခြေစွမ်းတည်ငြိမ်ပြီး ရင့်ကျက်ပါးနပ်တဲ့ ကစားနိုင်စွမ်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားသလို ၂၀၀၈ ခုနှစ်ကနေ အခုချိန်အထိ ပေါ်တူဂီအသင်းရဲ့ နံပါတ် ၁ ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုအဖြစ် ရပ်တည်နေဆဲဖြစ်ပေမယ့် ရီးရဲလ်ကစားသမားဟောင်းဟာ ကြံ့ခိုင်မှုပိုင်းအရတော့ ယူရိုအပြီးမှာ အနားယူရဖွယ် ရှိနေပါပြီ။
၁။ လူကာ မိုဒရစ်ခ်ျ – ခရိုအေးရှား
ခရိုအေးရှားအသင်းကို ကမ္ဘာ့ဖလားဗိုလ်လုပွဲအထိ ပို့ဆောင်ပေးထားခဲ့တဲ့ ဝါရင့်ကွင်းလယ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟာ ယူရို ၂၀၂၀ မှာလည်း အသင်းအတွက် အခရာအကျဆုံး ကစားသမားဖြစ်နေသလို ယူရိုပြိုင်ပွဲအပြီး လာမယ့် စက်တင်ဘာမှာ အသက် ၃၆ နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်တာကြောင့် လက်ရွေးစင်ကစားသမားဘဝကနေ အနားယူသွားဖွယ် ရှိနေသလို ၂၀၂၂ ကမ္ဘာ့ဖလားကို နောက်ဆုံးတကြိမ် ဝင်နွှဲဖို့လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။
ဒါ့အပြင် အခုယူရိုပြိုင်ပွဲမှာတော့ အံ့အားသင့်စရာတွေ ယူဆောင်လာခဲ့သူက စူပါကွန်ပျူတာပါ။ Sports Radar က ပြုလုပ်တဲ့ စူပါကွန်ပျူတာရဲ့ တွက်ချက်မှုမှာ ယူရိုချန်ပီယံဖြစ်မယ့်အသင်းက စပိန်၊ ဂျာမနီ၊ ပေါ်တူဂီတို့ကို ကျော်ဖြတ်ပြီး ယူရိုဗိုလ်လုပွဲမှာ ဒိန်းမတ်ကို သုံးဂိုး-နှစ်ဂိုးနဲ့ အနိုင်ယူဗိုလ်စွဲမယ့် ချက်လက်ရွေးစင်အသင်းဖြစ်တယ်လို့ သိခဲ့ရတာဟာ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားလည်းဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။
စူပါကွန်ပျူတာနဲ့ နောက်ထပ်ခန့်မှန်းချက်မှာတော့ အင်္ဂလန်အသင်းနဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် အမာခံပရိသတ်တွေအတွက်တော့ အသည်းကွဲစရာ သတင်းတပုဒ်ပါ။ ချန်ပီယံဖြစ်မယ်လို့ ရေပန်းစားနေတဲ့ အင်္ဂလန်အသင်းဟာ အုပ်စုဗိုလ်အဖြစ် လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ် ဆီမီးဖိုင်နယ်အထိသာ ရောက်လာနိုင်ပြီး ဒိန်းမတ်အသင်းရဲ့ အလဲထိုးခြင်းကို ခံရမယ်လို့ သုံးသပ်သွားခဲ့ခြင်းက ဘယ်လောက်အထိ မှန်ကန်နိုင်မလဲဆိုတာ ရောမမြို့က အီတလီနဲ့ တူရကီရဲ့ ယူရိုအဖွင့်ပွဲကနေ စတင်ရင်ခုန်ကြည့်ကြရအောင်ပါ။